काे हुन् मेस्सी र रोनाल्डोले पराग खाएर खोल सडकमा नफाल्नु भन्नुभएको छ है भन्दै हिँड्ने व्यक्ति ?
निराकार कमल शुक्रबार, असार १८, २०७८
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो खुबै भाइरल छ। जसमा रातो रंगको बाइक हाँकिरहेका एकजना व्यक्तिलाई पछाडिबाट कैद गरिएको छ। फोटोमा कैद भएका व्यक्तिले कालो रंगको ब्याग भिरेका छन्।
कालो रंगको उक्त ब्यागमा एउटा सेता पेपर टाँसिएको छ। र, जसमा कालै अक्षरले लेखिएको छ– मेस्सी र रोनाल्डोले पराग खाएर खोल बाटोमा नफाल्नु भन्नुभएको छ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा वायू वेगमा भाइरल भइरहेको यो फोटो हालसालैको भने होइन। न त ती व्यक्तिले यो फोटो भाइरल बनाँउछु भन्ने हेतुले कसैलाई खिच्न लगाएका हुन्। न त यो फोटो पहिलोपल्ट भाइरल भएको नै हो।
यो फोटो त आजभन्दा तीन वर्षअघिको हो। र, फोटोमा देखिएका व्यक्ति हुन्, भक्तपुर निवासी ३८ वर्षिय शशी विक्रम कार्की।
सन् २०१८, फुटबलको महाकुम्भ मेला विश्वकप चलिरहेको समय थियो त्यो। सबैको ध्यान फुटबलले तानिरहेको थियो। र, तानिरहेको थियो, सबैलाई आफूले समर्थन गरेको टिम र खेलाडीको प्रदर्शनले।
पेशाले फ्रेन्च भाषा शिक्षक र पर्यटक गाइड हुन्, कार्की। तर, उनलाई अधिकांशले सामाजिक अभियन्ताका रुपमा चिन्छन्।
जब जब देशमा कुनै मुद्धा बहस वा विवादको सतहमा आउँछ, उनी त्यसको समर्थन वा विरोधमा सडकमा पुगिहाल्छन्। चाहे त्यो नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने भारतको विरोध गर्न होस् या डा. गोविन्द केसीका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन। चाहे त्यो निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने राज्यको विरोध गर्न होस् या कोभिड महामारीमा फ्रन्टलाइनमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद दिन। उनी सबै अभियानको विरोध र समर्थनमा हातमा प्लेकार्ड र मुखमा बुलन्द नारा लिएर सडकमा सरिक भएका छन्, भइरहेका छन्।
उनी समाजमा कसरी सकारात्मक र दीर्घकालिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर सोचिरहन्छन्। उनी सधैँ घोत्लिरहन्छन्– कस्ता कस्ता क्याम्पेन, कसरी कसरी गर्दा अझ प्रभावकारी होला?
त्यो बेला पनि उनी एउटा क्याम्पेन गर्ने सोचमा थिए, एउटा यस्तो क्याम्पेन जसले सर्वसाधारणमा गहिरो र दीर्घकालिक प्रभाव पारोस्। तर, कसरी, के गरेर अनि के भनेर ? उनको दिमागमा केही सुझिरहेको थिएन।
‘आफूले प्रयोग गरेको फोहोर जथाभावी फाल्नु हुँदैन भन्ने जनचेतना फैलाउन नेपालमा आजसम्म सयौँ कार्याक्रम भए, सयौँ स्लोगन बने,’ कार्की तीन वर्षअघि फर्किए, ‘तर एकाधबाहेक सबै असफल भए, प्रभावकारी भएनन्। म आफैँले पनि थुप्रैपल्ट थुप्रै किसिमका क्याम्पेन गरेँ तर अधिकांश सफल हुन सकेनन्।’
यस्तैमा एकदिन उनको दिमागमा एउटा उपाय सुझ्यो, फुटबल र खेलाडीलाई सन्दर्भ बनाएर सन्देश दिने। अनि त्यसपछि उनले सेतो पेपरमा प्रिन्ट गरे– मेस्सी र रोनाल्डोले पराग खाएर सडकमा फोहोर नफाल्नु भन्नुभएको छै है।
उनी आफ्नो ब्यागमा यो कागज टाँसेर १० दिनजति बाइकमा हिँडे। उनको यो सन्देश देखेर कोही हाँस्थे भने कोही अगाडि पुगेर समर्थनमा ‘थम्ज अप’ गर्थे। त कोही उनको फोटो खिच्थे।
मानिसहरुले आफ्नो फोटो खिचिरहेका छन् भन्ने उनलाई थाहा हुन्थ्यो, लुकिङ ग्लासमार्फत। यो सब देख्दा उनी खुसीले गद्गद् हुन्थे। मनमनै सोच्थे– जे होस्, यसपालिको क्याम्पेन चाहिँ क्रियटिभ नै भएछ।
फुटबलको माहोलमा मानिसहरुले उनको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न थाले। बिस्तारै फोटो भाइरल हुन थाल्यो। सामाजिक सञ्जालको जमानामा भाइरल फोटो उनीसम्म आउन धेरै समय लागेन, छिट्टै उनीसम्म आइहाल्यो। तर, फेसबुकमा आफ्नो भाइरल फोटो देख्दा सुरुमा उनी झस्किए।
किन, भाइरल भइयो भनेर?
‘होइन ! मेरो हेल्मेटपछाडि ‘डब्ल्यू टी एफ’ लेखिएको रहेछ,’ उनी त्यो क्षण सम्झिएर अहिले पनि हाँस्छन्, ‘हुन त मलाई किन्ने बेलै हेल्मेटपछाडि यस्तो लेखिएको छ भनेर थाहा थियो। म यसले बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्ने चाहन्थेँ, त्यसैले झस्किएको थिएँ।’
फोटो दैनन्दिन अझ भाइरल हुन थाल्यो। उनले मानिसहरुबाट राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा पाउन थाले।
उनी भन्छन्, ‘मलाई मानिसहरुलाई जथाभावी फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसरी भन्नु थियो, जसरी भन्दा उहाँहरुलाई नराम्रो पनि नलागोस् र त्यो प्रभावकारी पनि होस्।’
अभियान सुरु गर्दाताका उनी कसैले जथाभावी फोहोर जथाभावी देख्दा फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई यसरी फोहोर फाल्नु हुन्न है भनेर सम्झाउँथे। उनी उसले फालेको फोहोर उसकै अगाडि टिपेर डस्टबिनमा हाल्थे, डस्टबिन नभए आफ्नै ब्यागमा हाल्थे।
तर, उनले यसो गर्दा मानिसहरु उनीसँग खुसी हुँदैन्थे। कोही उनलाई सुने पनि नसुने जस्तो गरिदिन्थे। त कोही उनीसँग झगडा नै गर्न तयार हुन्थे। त्यसपछि उनलाई लाग्न थाल्यो– मानिसहरुलाई यसरी फोहोर नफाल भनेर साध्य छैन। अब अलि रचनात्मक तरिकाले भन्नुपर्छ।
यो अभियान र यसमा लेखिएको कुरा यही सोचको उपज हो।
उनको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी नै एउटा अर्को कन्टेन्ट पनि भाइरल भएको थियो, त्यसको एक वर्षअघि। तर, त्यो चाहिँ फोटो होइन भिडियो थियो। उनी पर्यटक गाइड हुन्। सिजनमा उनी पर्यटकहरुलाई लिएर विभिन्न रमणीय ठाउँमा जान्छन्।
पर्यटकहरुलाई घुमाउने क्रममा उनी सन् २०१७ मा उनी तिलिचो ताल पुगेका थिए। तिलिचो रुटमा अव्यवस्थित रुपमा यत्रतत्र फालिएको फोहोर देखेर उनलाई साह्रै पीडाबोध भयो। उनले तिलोचो पुगुञ्जेलसम्म बाटोमा फालिएको फोहोर टिप्दै एउटा ठूलो प्लास्टिकमा संकलन गर्दै हिँडे, आफूले सके जति। तिलिचोसम्म पुग्दा उनले चार केजी फोहोर संकलन गरे।
तिलिचो पुगेपछि उनले आफूले टिपेको फोहोर हातमा लिएर एउटा भिडियो बनाए, तिलिचोबाट सादर अनुरोध शीर्षकमा। उनको यो भिडियो फेसबुकमा करिब ६ लाख पटक हेरिएको छ।
‘पछिल्लो एक दशकयता नेपालीहरुमा आफ्नै देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्ने बानिको विकास भइरहेको छ, जुन हरेक दृष्टिले राम्रो हो। घुम्ने परिपाटी दिनप्रति दिन मौलाउँदै गएको छ र जानेछ। यो अझ खुसीको कुरा हो,’ हामी जिम्मेवार नभएकोप्रति उनी चिन्तित छन्, ‘तर हामी अधिकांश घुम्दै गर्दा जिम्मेवार भने हँदैनौँ। आफूले प्रयोग गरेको फोहोर जथाभावी फालेर आउँछौँ।’
उनी थन्छन्, ‘फेरि हामी नियतवश जथाभावी फोहोर गरिरहेका पनि हुँदैनौँ। हामीलाई त हामी आफूले फोहोर फालिरहेका छौँ भन्नेसमेत थाहा हुँदैन। हामी अलिकति मात्र सचेत हुने हो भने पनि यो समस्या ९० प्रतिशत समाधान भइजान्छ।’
मानिसहरुमा सचेतना फैलाउन उनी हरेक दिन नयाँ–नयाँ अभियान र प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। समाजलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका हुन्छन्।
कार्की यसरी सोच्न आफू स्वर्गिय उज्ज्वल थापाबाट एकदमै प्रभावित भएको बताउँछन्, कार्की। यतिमात्र होइन उनी आफू विभिन्न अभियानमा संलग्न हुन र समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिमै आउन उज्ज्वल थापाबाटै प्रेरित भएको बताउँछन्।
‘उज्ज्वल दाइसँग हामी दिनदिनभर रातरातभर अब कस्ता कार्यक्रमसाथ, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गथ्र्यौँ। उहाँ हामीलाई अभियानको आइडियामात्र सुझाउनु हुुन्नथ्यो, अभियान सफल नहुँदा निरोत्साहित नहुन प्रेरणा पनि दिनु हुन्थ्यो,’ थापालाई सम्झिएर थोरै भावुक सुनिए कार्की, ‘उहाँ हामीलाई आफूहरु लामो रेसको घोडा भएकाले हिजोको आजै नतिजा खोज्न नहुने भन्नुहुन्थ्यो। अब हामी जीवनभर उहाँले देख्नुभएका सपनाहरु पुरा गर्न उहाँले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्नेछौँ र दिनरात एक बनाएर लाग्नेछौँ।’
कार्की उज्ज्वल थापा नेतृत्वको तत्कालिन विवेकशील नेपालीसँग सन् २०१६ मा साधारण सदस्यका रुपमा जोडिएका थिए। उनी विवेकशीलको विचार र अभियानबाट कति प्रभावित भए भने उनी केही वर्षपछि त्यही पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमात्र भएनन्, २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर दुईबाट चुनावसमेत लडे।
अहिले उनी विवेकशील पार्टीमा आबद्ध छन्। विवेकशील साझासँगको एकतामा सहभागी नभएका उनीहरु अहिले छुट्टै पार्टी बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्। विभिन्न अभियानहरु गरिरहेका छन्।
केही महिनाअघि विवेकशील पार्टीले माइतीघर मण्डलामा विभिन्न रचनात्मक अभियानमार्फत सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन ल्याउन दबाब दिएको थियो। त्यस्तै, अहिले यो पार्टी ‘लुटतन्त्रविरुद्ध सुचनाको हक’ नामको एउटा अभियान बनाएर अगाडि बढिरहेको छ।
कार्की रचनात्मक अभियानमा विश्वास गर्छन्। र, विश्वास गर्छन्– रचनात्मक अभियानले नै समाजका समस्या समाधान गर्छ, समाजलाई निकाश दिन्छ।
कार्कीले अहिलेसम्म कति आफ्नै नेतृत्वमा अभियान गरेका छन् भने कति अरुले नेतृत्व गरेका अभियानमा सहभागी भएका छन्। आफूले गरेको होस् या अरुले यदि अभियानले जायज मुद्धा उठाएको छ भने उनी सरिक हुन्छन्।
‘तेल चाहिन्छ लैजाउ हाम्रो स्वाभिमान दिनौँ, पुनर्निमाण कहाँ पुग्यो सरकार, नेपाल खुल्ला छ, निर्मलालाई न्याय दे, नोट चल्ने तर भोट नचल्ने, लुटतन्त्रविरुद्ध सुचनाको हक, नेता हौ कि माफिया, सरकार, जनतालाई छिटो भ्याक्सिन उपलब्ध गरा, संसद विघटन खारेज गर, विकासको नाउँमा विनास बन्द गर,’ लगायतका विभिन्न नारा बनाइएका अभियानमा उनी सरिक भएका छन्।
अभियानकै क्रममा उनी थुप्रैपल्ट पक्राउ पनि परेका छन्। तर, प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्दा उनी किञ्चित दुखी हुँदैनन्। बरु उनी भन्छन्, ‘बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदा मलाई पक्राउ गरिन्छ भने गरियोस्। म जेलै जान पनि तयार छु। तर, म बेथितीविरुद्ध बोल्न छाड्ने छैन।’
कार्की कसैले पनि बेथितीविरुद्ध बोल्न डराउन नहुने र आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन्। जुनै पनि साशक जहिले पनि निरंकुश हुने भएकाले नागरिकहरुले खबरदारी गर्न छाड्न नहुने उनको निष्कर्ष छ।
उनले बुझेका छन्– नागरिकहरुको निरन्तर खबरदारीले नै लोकतन्त्र मजबुद हुँदै जान्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १८, २०७८ १६:०३